Vaovao - Inona no atao hoe famindrana herinaratra USB?
Na izany aza, ity olan'ny fampifanarahana ity dia saika ho lasa taloha tamin'ny fampidirana ny famaritana Power Power USB. Ny fandefasana herinaratra USB (na PD, raha fintinina) dia fenitry ny famahanana tokana izay azo ampiasaina manerana ny fitaovana USB rehetra. Raha ny mahazatra, ny fitaovana tsirairay ampiasain'ny USB dia hanana adapter manokana, fa tsy intsony. Ny PD PD iray manerantany dia afaka hampiasa fitaovana isan-karazany.
Fomba telo lehibe amin'ny fandefasana herinaratra USB?
Ka ankehitriny rehefa fantatrao kely ny momba ny fenitry ny USB Power Delivery, inona ny sasany amin'ireo fiasa lehibe mahatonga azy io ho mendrika? Ny fisarihana lehibe indrindra dia ny fampitomboana ny herinaratra USB hatramin'ny 100W. Midika izany fa ho afaka hiakatra haingana be kokoa noho ny teo aloha ny fitaovanao. Ary koa, ity dia hiasa amin'ny ankamaroan'ny fitaovana ary ho tsara ho an'ny mpampiasa Nintendo Switch, satria efa be ny fitarainana momba azy io.
Endri-javatra lehibe iray hafa an'ny USB PD dia ny tsy fanamboarana intsony ny làlan-kery. Taloha, raha ampidirina amin'ny solosainao ny findainao, dia handoavana ny telefaoninao izany. Saingy amin'ny alàlan'ny famoahana herinaratra, ny telefaona ampidirinao dia mety tompon'andraikitra amin'ny famelomana ny kapila mafy.
Ny fandefasana herinaratra dia hiantoka ihany koa ny fitaovana tsy ho lafo loatra ary hanome ny habetsaky ny ranom-boankazo ilaina. Na dia tsy afaka manararaotra ny hery fanampiny aza ny ankamaroan'ny telefaona finday, fitaovana sy solosaina maro hafa no ho afaka.
Fanaterana herinaratra - famoahana ny ho avy
Ho famaranana, ity fenitra vaovao amin'ny famahana USB ity dia mety hanova ny tontolon'ny teknolojia araka ny ahalalantsika azy. Miaraka amin'ny Power Delivery, fitaovana marobe isan-karazany no afaka mizara ny sarany amin'izy samy izy ary mifampatanjaka tsy misy olana. Ny fandefasana herinaratra dia fomba tsotra sy tsotra kokoa handehanana amin'ny famoahana ny fitaovanao rehetra.
Rehefa manohy mampiasa herinaratra bebe kokoa ny finday sy ny fitaovantsika, dia mety hanjary fahita matetika ny fandefasana herinaratra USB. Na ny banky herinaratra aza izao dia manana USB PD hibaiko na hampandeha fitaovana mitaky herinaratra betsaka (eritrereto MacBooks, Switches, GoPros, drone sy maro hafa). Azo antoka fa manantena ny ho avy izay azo zarazaraina izahay.
Fotoana fandefasana: Oct-14-2020